नर्वेमा के हेर्ने: अद्भुत परिदृश्य र दर्शनीय शहरहरू Absolut यात्रा
नर्वेमा के हेर्ने
लुइस मार्टिनो | | नर्वे
नर्वेमा के हेर्ने भनेर कुरा गरिरहेको छ अरोरा बोरलिस, विशाल fjords, बहुमूल्य नर्डिक शहरहरू y हराएका गाउँहरू पूर्ण रूपमा आर्कटिक सर्कल। तर पुरानो देशबाट पनि पौराणिक कथा द्वारा जनसंख्या vikingos र आधुनिक देशको पुरानो परम्पराको।
Scandinavian प्रायद्वीप मा अवस्थित, जस्तै Suecia o Finlandia, र आकार मा अधिक तीन लाख वर्ग किलोमीटर, नर्वे द्वारा नुहाएको छ बेन्ट समुद्र र एघार प्रशासकीय क्षेत्रहरुमा विभाजित o फिलकर्स अघिल्लो भन्दा यो अझ सुन्दर छ। यदि तपाइँ नर्वेमा के हेर्ने भनेर पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ, हामी तपाइँलाई हाम्रो अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 नर्वेमा के हेर्ने: शहरहरू र प्रकृति
1.1 ओस्लो, प्राचीन ईसाई धर्म
1.2 ट्रोमसो, उत्तरी लाइटहरूको देश
1.3 बर्गेन, काठका घरहरूको शहर
1.4 Alesund, नर्वे मा हेर्नको लागि fjords मा अर्को सुरूवात
1.5 ट्रन्डहिम वा नर्वेको मुटुमा के हेर्ने
1.6 स्वाल्भार्ड टापु, उत्तरी ध्रुव मार्ग
1.7 क्रिस्टियानान्ड, समुद्री तटहरू नर्वेमा हेर्नका लागि
1.8 पूर्वी नर्वे: शानदार उपत्यका र पहाडहरू
2 नर्वे यात्रा गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ
3 नर्वे कसरी पुग्ने
नर्वेमा के हेर्ने: शहरहरू र प्रकृति
हामी राजधानीमा नर्वेको यात्रा सुरु गर्नेछौं, ओस्लो, देशको दक्षिणमा अवस्थित र उत्तरी, पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रहरूको माध्यमबाट तपाईंको यात्रा जारी राख्नुहोस्, ती सबैले तपाईंलाई उत्कृष्ट स्मारकहरू र परिदृश्य प्रस्ताव गर्दछ।
ओस्लो, प्राचीन ईसाई धर्म
१ris 1897 until सम्ममा क्रिस्टियानो भनिन्छ, लगभग सात लाख बासिन्दाहरूको साथमा कोपेनहेगन र स्टकहोम पछि स्कान्डिनेभियामा यो तेस्रो शहर हो। यो १ 1314१XNUMX देखि देशको राजधानीको रूपमा सेवा गर्दै आएको छ Haakon V उनले त्यहाँ अदालत स्थापना गरे।
शहरको सबै भन्दा प्रतिष्ठित स्मारक प्रभावशाली छ Akershus गढी, सात सय वर्ष पहिले निर्माण गरीएको थियो तर १ena औं शताब्दीमा पुनर्जागरण शैलीका साथ बृहत्तर रूपमा मर्मत गरिएको थियो। पछि, अन्य एनेक्स भवनहरू पनि थप गरियो। ती भवनहरू मध्ये एकमा तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ नार्वेजियन प्रतिरोध संग्रहालय, जसले १ 1940 .० र १ 1945 .XNUMX बीचको जर्मन कब्जालाई देशको विरोधको इतिहास स col्ग्रह गर्दछ।
अन्य नागरिक निर्माण जुन हामीले तपाईंलाई ओस्लोमा भ्रमण गर्न सल्लाह दिन्छौं त्यो प्रभावशाली हो रयल पैलेस, नियोक्लासिकल शैली; को निर्माण भण्डारण गर्दै o नर्वेको संसद; हडताल टाउन हॉल, जहाँ नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ, र Vigland पार्क, जसले कलाकारको मूर्तिकलाहरूको स्थायी प्रदर्शनीको रूपमा पनि काम गर्छ जसले यसलाई यसको नाम दिन्छ, गुस्ताभ भिजल्यान्ड.
नर्वे संसद भवन
धार्मिक निर्माणको सम्बन्धमा, हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले यो देख्नु होस् ओस्लो र सेन्ट ओलाफको उद्धारकर्ताका क्याथेड्रल्सपछिल्लो सम्पूर्ण देशको सबैभन्दा ठूलो हो र एक नियो-गोथिक शैली छ; साथै Gamle Aker र ट्रिनिटी गिर्जाघरहरू, जस मध्ये पहिलो, रोमान्स्क, राजधानीमा सब भन्दा पुरानो भवन हो।
अन्तमा, तपाईंले चित्रकारलाई समर्पितको जस्तो संग्रहालयहरू नदेखाई ओस्लो छोड्नुहुन्न एडवर्ड Munch र को सबै भन्दा जिज्ञासु Kon-Tiki, नर्वेली साहसीको बारेमा थोर हेयरधालर को वाइकि sh जहाजहरू। बिर्सनु हुँदैन नार्वेजियन मानिसहरूखुल्ला हावामा र यसले तपाईंलाई त्यहाँका निवासीहरूको चलन र परम्पराका साथ देश भरका घरहरू देखाउँदछ।
ट्रोमसो, उत्तरी लाइटहरूको देश
हामी ट्रोम्सोलाई भेट्न नर्वेको उत्तरी भागमा पुग्छौं जुन भौगोलिक (गैर राजनीतिक) क्षेत्रभित्र पर्छ ल्यापल्याण्ड। यो बाट यसको नाम लिन्छ ट्रोमसोया टापु, जहाँ शहर केन्द्र स्थित छ।
यसमा तपाईले मन्दिरहरू देख्न सक्नुहुन्छ प्राचीन क्याथेड्रल 1861 मा निर्माण र संग्रहालयहरू जस्तै कि ट्रोमसो विश्वविद्यालय, जहाँ तपाईं इतिहास र परम्परा को बारे मा जान्न सक्नुहुन्छ सामी मानिसहरू वा ल्याप र जो शानदार र अद्वितीयको साथ पूरा भयो आर्कटिक-अल्पाइन बोटानिकल गार्डन। तर सायद आधुनिक एक बढी देखी छ आर्कटिक क्याथेड्रल, १ 1965 .XNUMX निर्माण जुन युरोपमा सबैभन्दा ठूलो विन्डो रहेको छ। साथै, ट्रोमसो यसको सहरी जीवनको लागि प्रसिद्ध छ र धेरै संगीत समारोहहरूको आयोजन गर्दछ।
यद्यपि यस क्षेत्रको उत्तम शहरको दुर्गम क्षेत्रहरूमा फेला पर्‍यो। तपाईका लागि उत्तम ठाउँहरू हेर्नका लागि यी उत्कृष्ट स्थानहरू छन् अरोरा बोरलिस, कल "मध्यरातको सुर्य" र पनि व्हेल हेर्दै। तपाईं मा युरोपको उत्तरी भागमा पुग्न सक्नुहुन्छ उत्तर केपमा चरा हेर्नुहोस् Varanger प्रायद्वीप र एउटा बरफको होटलमा रात बिताउनुहोस् किर्केनेस.
बर्गेन, काठका घरहरूको शहर
नर्वेमा के हेर्ने बारेमा कुरा गर्नुहोस् र यसको भव्य उल्लेख नगर्नुहोस् fjords यो अक्षम्य हुनेछ। र बर्गन केही केहि प्रभावशाली व्यक्तिहरूको प्रवेशद्वार हो Sogne, नर्वेको सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा गहिरा मानिन्छ, वा त्यो हार्डनेजर, कहाँ छ Trolltunga पठार.
बर्गन बाट तपाई रेल बाट गाउँ जान पनि सक्नुहुन्छ फलाम बनाउने संसारको सब भन्दा सुन्दर रेल मार्गहरु मध्ये एक को fjord को आन्तरिक भाग मा भएको लागि अरल्याण्ड र भव्य झरनाहरूको साथ गहिरो खोलाहरू पार गर्नुहोस्।
तर तपाइँसँग आफैले देख्न पनि रोचक चीजहरू छन् बर्गन। उदाहरण को लागी, को सुन्दर पड़ोस Bryggen र को स्ट्रान्डिसडेनयसका काठका घरहरू रमाइलो रंगमा रंगिएका छन्। वा सुन्दरको पनि भ्रमण गर्नुहोस् निलो स्टोन वर्ग, कहाँ छ सान जुआनको चर्च। जे होस्, यदि हामी मन्दिरको बारेमा कुरा गर्छौं भने सान्ता मारियाको चर्चशहरको सब भन्दा पुरानो भवन १२ औं शताब्दीको हो। र पनि सेन्ट ओलाफ क्याथेड्रल, धेरै धेरै पछि।
अन्तमा, तपाईं मा जानु बिना शहर छोड्न सक्नुहुन्न Floyen को दृष्टिकोण, जुन फ्लोबान फनिक्युलरबाट पुग्छ र जुन तपाईंसँग बर्गनको आफै र असामान्य दृश्यहरू पनि छन्।
Alesund, नर्वे मा हेर्नको लागि fjords मा अर्को सुरूवात
जबकि बर्गन एक उत्कृष्ट शुरुवात बिन्दु fjords हेर्न को लागी, Alesund सबै नर्वे मा सबै भन्दा देख्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ। त्यसको बारेमा geiranger fjord, को रूपमा सूचीबद्ध विश्व सम्पदा, तर त्यहाँ अरु धेरै छन्।
अर्कोतर्फ, यो क्षेत्र आदर्श छ यदि तपाईंलाई मनपर्‍यो भने पहाड चढाई किनभने यो मा छ Andalsnes, यस खेल गतिविधिको नर्वेको राजधानी मानिन्छ र जुन तपाईं अर्को सुन्दर रेल मार्ग लिएर जान सक्नुहुनेछ।
तर हामी तपाईंलाई माथि उल्लिखित ठाउँमा रोक्न सल्लाह दिन्छौं Alesund, एक रत्न रूपमा चिनिन्छ Art कला नौवेव शहर » यो सुन्दर वास्तुकला शैलीको ठूलो संख्याको भवनहरूको लागि।
ट्रन्डहिम वा नर्वेको मुटुमा के हेर्ने
को क्षेत्र मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण शहर Trondelag, यो शहर को रूपमा चिनिन्छ "नॉर्डिक स्वादहरूको जन्मभूमि" यसको धेरै संख्यामा रेस्टुरेन्टहरूको कारणले मिशेलिन तारा। तर यसको अतिरिक्त, मध्य युगको दौडान यो नर्वेको धार्मिक राजधानी थियो जुन यसको भव्य दृश्यको कारण थियो निदरोस गिरजाघर, गोथिक-एलिजाबेथन आधारको साथ भवन, र मा आर्चबिशपको दरबार, जुन सबै नॉर्डिक देशहरूमा सब भन्दा पुरानो नागरिक निर्माण हो।
यसबाहेक, ट्रोन्डाइम एक हो विश्वविद्यालय शहर जसको विज्ञानका संकायहरू, एक सुन्दर भवनमा। र यो पनि एक महत्वपूर्ण सैन्य गढ थियो, द्वारा प्रमाणित क्रिस्टियानसेन र मुन्खोलमेन टापु फोर्टहरू.
तर Trondelag क्षेत्रमा अन्य आकर्षणहरू छन् जुन हामी तपाईंलाई भ्रमण गर्न सल्लाह दिन्छौं। यो खानी शहर को मामला हो रोरोस, यो के हो विश्व सम्पदा र त्यो, यसको काठको घरहरू र तामाको खानहरूको साथ, तपाईंलाई समयमै फिर्ता यात्रामा मद्दत पुर्‍याउँछ। र त्यो पनि इन्देरॉय गोल्ड मार्ग, जुन यसको नामको बाबजुद पनि, बहुमूल्य खनिजसँग केहि गर्न सक्दैन, तर अद्भुत परिदृश्यहरू जसले तपाईंलाई उदासीन छोड्दैन।
स्वाल्भार्ड टापु, उत्तरी ध्रुव मार्ग
यो द्वीपसमूह बीचको बीचमा अवस्थित छ आर्कटिक महासागर। यसले तपाईलाई चकित पार्दैन, त्यसकारण, तपाईले गर्न सक्ने मुख्य गतिविधिहरुaमा सवारी भईरहेछ कुकुर स्लेज, हेर्नुहोस् अरोरा बोरलिस वा भ्रमण गर्नुहोस् हिम गुफाहरू। थप रूपमा, यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इलाकामा, Longyearbyen, तपाईं एक अद्भुत परिदृश्य सराहना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र, एक जिज्ञासाको रूपमा, यसलाई जान्नुहोस् विश्वविद्यालय, जुन विश्वको उत्तरी हो।
क्रिस्टियानान्ड, समुद्री तटहरू नर्वेमा हेर्नका लागि
देशको दक्षिणमा नर्वेली छुट्टी क्षेत्र छ। यो तार्किक छ, किनकि यसमा देश र अन्य कुनै पनि बिन्दुहरू भन्दा बढी घण्टा धूप छ राम्रो तटहरू। तर तपाईंसँग साना खास माछा मार्ने गाउँहरू पनि छन्, तिनीहरूका सेता काठका घरहरू जस्ता रिसोल, ग्रिमस्टैड o अरेन्डल। र, यदि तपाईं सर्नुभयो Setesdal उपत्यकासुन्दर परिदृश्यहरू र घाँसे-छत भवनहरूको थपमा, तपाईं नर्वेको केही पुरानो परम्पराहरूको बारेमा पनि सिक्नुहुनेछ।
तर यस क्षेत्रमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण शहर हो Kristiansand, तिनीहरूसँग आरामदायक समुद्री किनार छ। तर सबै भन्दा माथि, Posebyen ओल्ड टाउन, शहरको एक मात्र भाग जुन त्यसमा १ fire 1892 fire मा भस्म भएको ठूलो आगोबाट बचायो। यसको सडकहरूमा रूखहरूले सजिएको र पुराना काठका घरहरूले भरिएको आनन्दको कुरा हो।
साथै, यदि तपाइँ तपाइँका बच्चाहरूसँग यात्रा गर्नुहुन्छ, क्रिस्टियान्डमा र तपाइँसँग Dyreparken, एउटा मनोरञ्जन पार्क र चिडियाखाना जुन तपाईंले मनपराउनुहुनेछ। तपाईंको पक्षको लागि, यदि तपाईंलाई ग्यास्ट्रोनोमी मनपर्‍यो भने, Lindesnes मा तपाईं खान सक्नुहुन्छ अन्तर्गत, संसारमा सब भन्दा ठूलो भूमिगत रेस्टुरेन्ट र जो एक छ मिशेलिन तारा.
पूर्वी नर्वे: शानदार उपत्यका र पहाडहरू
अन्तमा, हामी तपाईंलाई पूर्वी नर्वेमा लैजान्छौं देशको सब भन्दा प्रभावशाली राष्ट्रिय निकुञ्जहरू हेर्न। ती मध्ये एक डोभ्रेफजेलको Jotunheime र एक रोडेन। तपाईं पनि ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ टेलीमार्क च्यानल र सँगै पैदल यात्रामा जानुहोस् गुडब्रान्स्डालेन उपत्यका.
तर, यदि तपाइँ स्किइ ofको शौक राख्नुहुन्छ भने, तपाइँ याद गर्नुहुनेछ कि, नर्डिक देशमा हामी यस खेलको अभ्यास गर्न स्टेशनहरूबारे कुरा गरिरहेका छौं। केवल केहि राम्रा, जस्तो ती जिलो, हेमसेकल o ट्राइसिल, नर्वेको पूर्वी क्षेत्रमा पाइन्छ।
नर्वे यात्रा गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ
हामीले तपाईलाई भन्नु पर्दैन कि नर्वे एकदम चिसो छ। सबै भन्दा न्यानो ग्रीष्म occurतुहरू हुन्छन्, जस्तो हामीले देशको दक्षिणमा भन्यौं, त्यहाँ पनि अधिक घण्टा धूप। यसको ब्यवहार नर्वेको अनौंठोपन हो। क्षेत्र मा अन्य देशहरु मा जस्तै, नोभेम्बर र जनवरी को अन्त्य बीच तपाईं सूर्यलाई सायद देख्न सक्नुहुन्छ (उत्तरी क्षेत्रहरूमा केहि पनि छैन)। जे होस्, मेको अन्त्यदेखि जुलाईको अन्त्यसम्म, यो केवल थोरैको साथ सेट हुन्छ एक दिनमा बीस घण्टा प्रकाश। तसर्थ, नर्वे को काव्य नाम बाट परिचित छ "मध्यरात सूर्य को भूमि".
तसर्थ, हामी तपाईंलाई नॉर्डिक देश भ्रमणको लागि समय सिफारिश गर्न सक्दैनौं, केवल किनभने यो तपाई के गर्न चाहानुहुन्छमा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं उत्तरी लाइट्स हेर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई भित्र जानु पर्छ जाडो। तर, यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ पर्यटन गर्नु हो भने हामी तपाईंलाई जान सल्लाह दिन्छौं मे र सेप्टेम्बर बीच, जब मौसम हल्का छ र दिनहरू धेरै लामो छ, हामीले भने जस्तै।
नर्वे कसरी पुग्ने
नर्डिक देशको लागि यात्रा धेरै सजिलो छ। यसको मुख्य एयरपोर्ट हो ओस्लो, तर त्यहाँ अन्य शहरहरूमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रियहरू पनि छन् बर्गन, टम्सो o Kristiansand। साथै तपाई पछिल्लोबाट सब भन्दा टाढाका स्थानहरूमा उडान गर्न सक्नुहुनेछ लोफोटेन टापुहरू, लास स्वाल्भार्ड र पनि उत्तर केप.
रोरोस खनन शहर
तपाईं रेल द्वारा नर्वे जान सक्नुहुन्छ। ओस्लो रेल बाट जोडिएको छ Copenhague, स्टकहोम o गोथेनबर्ग र, यीबाट, सबै यूरोपमा। यही बसको बारेमा पनि भन्न सकिन्छ र यदि तपाईं डु prefer्गालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने त्यहाँ बाट पनि लाइनहरू छन् अल्बानिया, डेनमार्क y Suecia नर्वे मा विभिन्न शहरहरु।
एक पटक देशमा, हामी तपाईंलाई यस मार्फत यात्रा गर्न सल्लाह दिन्छौं tren। यो संग विश्वका सब भन्दा राम्रा रेल लाइनहरू। ती मध्ये, कि नॉर्डल्याण्ड; त्यो बर्गन, कि थोपा पहाड परिदृश्य पार; त्यो फलाम, जसको बारेमा हामीले तपाईंलाई पहिले नै बताइसकेका छौं, वा त्यो डोभ्रे, जसले प्रभावशाली हिउँ मैदानहरू सहित प्राकृतिक पार्कहरू पार गर्दछ।
अन्तमा, यदि तपाईं नर्वेमा के हेर्ने भनेर सोचिरहनुभएको थियो भने, तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि यसले तपाईंलाई उत्तरी लाइटहरू भन्दा धेरै प्रदान गर्दछ। बहुमूल्य छ इतिहास र स्मारक को एक धेरै संग शहरहरु, थोप्दै पहाडी दृश्य र पनि समुद्र तट देश को दक्षिण मा। के तपाई नर्वे जान्न चाहानुहुन्न?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » नर्वेमा के हेर्ने